Information Portal of TVET Myanmar
TVET Education is part of the National Education System
TVET Programme enables learners to higher level of Qualifications
Non-formal TVET programmes are offered by 13 different line ministries
Search TVET School
Category Select Category Government Technical Institutes (GTI) Government Technical High Schools (GTHS) Vocational Institute
Location - Select Location - Ayeyarwady Region Bago Region Chin State Kachin State Kayah State Kayin State Magway Region Mandalay Region Mon State Naypyitaw Region Rakhine State Sagaing Region Shan State Tanintharyi Region Yangon Region
TVET provision under Ministry of Science and Technology
In Myanmar,avariety of 2-year-certificate technology courses, 3-year-diploma engineering courses and other competency-based short courses are offered by Department of Technical and Vocational Education and Training asafocal department. In order to assure quality in TVET andademand driven TVET system, DTVET is implementingaquality management system in Technical and Vocational Educational and Training sector according to international standard and upgrading teaching, learning and research sector by using effective and efficient technologies and methodologies.
We look forward to developing Technical and Vocational Education and Training as the first-class education in Myanmar and aiming to increase the employment and per capita income through the provision of technical and Vocational training. With the aim to sustainably nurture the qualified human resources essential for fulfilling local industrial needs to promote the socio-economic development of the country, DTVET has opened over (70) TVET institutes around the country. Moreover, DTVET is expanding training schools in accordance with the needs of the region for the development of the country.
In addition, DTVET is supporting to the potential workers (students, trainees, and apprentices) to easily enter the world of work with the collaboration of the private sector as well as concerned ministries and simultaneously, we are establishing to promote the Public-Private Partnership (PPP) system in TVET sector.
တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း (၁)
၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လအထိ (၆)လ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်
၁။ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်များ၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံများ၊ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းများ၊ သင်တန်းဌာနများနှင့် သင်တန်းကျောင်းများအတွက် လိုအပ်သော သင်ကြားရေးသုံး သင်ထောက်ကူစက်ပစ္စည်းများ၊ ရုံးသုံးစက် ကိရိယာများနှင့် ရုံးသုံးပရိဘောဂများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
၂။ Open Tender ပုံစံများကို (၈ - ၁၀ - ၂၀၂၁) ရက်နေ့မှစ၍ ရုံးချိန်အတွင်း အစိုးရနည်းပညာ ကောလိပ်(နေပြည်တော်)၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(အင်းစိန်)နှင့် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မန္တလေး)တို့ တွင် တစ်စုံလျှင် ကျပ်(၁၀၀၀၀/-) နှုန်းဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး (၈ - ၁၁ - ၂၀၂၁) ရက်နေ့ ညနေ(၄:၀၀) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ Tender ပုံစံဝယ်ယူခဲ့သော ကျောင်းသို့ တင်ဒါများ တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ အဆိုပါ သင်ကြားရေးသုံး သင်ထောက်ကူစက်ပစ္စည်းများ၊ ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများနှင့် ရုံးသုံး ပရိဘောဂများအား သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့် ကျောင်းများအရောက် ပေးပို့တပ်ဆင်ပေးနိုင်ရမည်။
၄။ Open Tender ပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရုံးချိန်အတွင်း ဖုန်း-၀၆၇၃-၄၀၄၅၀၅/ ၀၆၇၃-၄၀၄၃၈၉/ ၀၆၇၃-၄၀၄၄၅၆ နှင့် website ဖြစ်သော www.tvet.edu.mm တို့တွင် ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း (၂ )
၂၀၂၁ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ခုနှစ်၊မတ်လအထိ (၆လ)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်
၁။ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ အစိုးရနည်းပညာကော လိပ်များ၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံများ၊ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်း‌ကျောင်းများ၊ ဦးစီး ဌာန၊ သင်တန်းဌာနများနှင့် သင်တန်းကျောင်းများတွင် ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း (၁၅၀)ခုအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို (၁၉-၁၀-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှစ၍ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် (နေပြည်တော်)၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(အင်းစိန်)နှင့် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (မန္တလေး) တို့တွင် ရုံးချိန်အတွင်း ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို (၁၉-၁၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့၊ ညနေ(၄:၀၀) နာရီနောက်ဆုံးထား၍ တင်ဒါပုံစံဝယ်ယူခဲ့သောကျောင်းများတွင် တင်ဒါ တင်သွင်း ရမည်ဖြစ်ပါ သည်။
၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရုံးချိန် အတွင်း ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇၃၄၀၄၀၂၀ ၊ ၀၆၇၃၄၀၄၄၈၀နှင့် Website ဖြစ်သော www.tvet.edu.mm တို့တွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
(တင်ဒါဖောင်ကြေး အပြောင်းအလဲရှိခြင်းကြောင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားပါသည်)
နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း ( ၃ )
တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် QA/QC လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်
၁။ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ အစိုးရနည်းပညာကော လိပ်များ၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံများ၊ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်း‌ကျောင်းများနှင့် သင်တန်း ကျောင်းများတွင် ဆောင်ရွက်မည့်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများမှ လုပ်ငန်း(၅၃)ခုအား QA/QC လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို (၂၂-၁၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှစ၍ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် (နေပြည်တော်)၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(အင်းစိန်)နှင့် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (မန္တလေး)တို့တွင် ရုံးချိန်အတွင်း ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို (၂၂-၁၂-၂၀၂၁)ရက်နေ့၊ ညနေ (၄:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်ဒါပုံစံဝယ်ယူခဲ့သောကျောင်းများတွင် တင်ဒါပုံစံများပြန်လည် တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ၊စည်းကမ်းချက်များနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရုံးချိန် အတွင်း ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇၃၄၀၄၀၂၀၊ ၀၆၇၃၄၀၄၄၈၀ နှင့် Website ဖြစ်သော www.tvet.edu.mm တို့တွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း ( ၄ )
အကြိုအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း (၆)ခုအတွက် ဆောင်ရွက်ရန်
၁။ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ များ၊ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းများနှင့် သင်တန်းကျောင်းများအတွက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လအထိ (၆)လ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် (အခြား)တွင်ပါဝင်သော အကြိုအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း(၆)ခုအား လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို (၁၃.၁၂.၂၀၂၁)ရက်နေ့မှစ၍ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် (နေ ပြည်တော်)၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(အင်းစိန်)နှင့် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မန္တလေး)တို့တွင် ရုံးချိန်အတွင်း ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို (၁၃.၁.၂၀၂၂) ရက်နေ့၊ ညနေ(၄း၀၀) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ မိမိတို့တင်ဒါပုံစံဝယ်ယူခဲ့သောကျောင်းများတွင် တင်ဒါပုံစံများအား ပြန်လည်တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရုံးချိန် အတွင်းဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇၃၄၀၄၀၂၀၊ ၀၆၇၃၄၀၄၄၈၀ နှင့် Website ဖြစ်သော www.tvet.edu.mm တို့တွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း ( ၅ )
၂၀၂၂- ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်
၁။ နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ အစိုးရနည်းပညာကော လိပ်များ၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံများ၊ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်း‌ကျောင်းများ၊ ဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းဌာနများနှင့် သင်တန်းကျောင်းများတွင်ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း (၆၆)ခု အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနရှိ အစိုးရ နည်းပညာကောလိပ်(နေပြည်တော်)၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(အင်းစိန်)နှင့် အစိုးရစက်မှုလက်မှု သိပ္ပံ(မန္တလေး)တို့တွင် (၁၈-၄-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၂-၅-၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ရုံးချိန်အတွင်း ရောင်းချ မည်ဖြစ်ပြီး ပြန်လည်တင်သွင်းလာမည့်တင်ဒါပုံစံများကို (၃-၅-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၁၇-၅-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ ရုံးချိန်အတွင်း တင်ဒါပုံစံဝယ်ယူခဲ့သောကျောင်းများတွင် ပြန်လည်တင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရုံးချိန် အတွင်း ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇၃၄၀၄၀၂၀၊ ၀၆၇၃၄၀၄၄၈၀(ဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုပ်)၊ ၀၉၈၈၇၆၄၅၅၈၀ (အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်၊ နေပြည်တော်)၊ ၀၉၄၄၃၉၇၃၆၀၇ (အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ၊ အင်းစိန်)၊ ၀၉၇၇၆၆၈၀၂၃၈ (အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ၊ မန္တလေး)တို့တွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပြီး Website ဖြစ်သော www.dtvet.gov.mm တို့တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Address: ရုံးအမှတ်(၂၁)၊ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်။
TVET ကျောင်းများ၏ ဖုန်းနံပါတ်များ
©2019 TVET Myanmar. All Rights Reserved.